Dragon City: dragona, ady, hetsika ary mahafinaritra be amin'ity lalao ity | Androidsis
Meteza ho tompon'ny dragona, miadia amin'ny hafa ary miomàna amin'ireo fikomiana amin'ny Dragon City
Aaron Rivas | | Fampiharana Android, Lalao Android
Raha tianao ny dragona, dia mpankafy an'io karazana zavaboary angano sy lalao simulation io ianao, Dragon City no lalao mety aminao, izay ahafahanao mandany ora sy ora maro mifamatotra amin'ny sary mahafinaritra sy ny tetika mahaliana, izay tsy maintsy hiadivanao sy hampiofana ny dragona anao handresy ny fandresena amin'ny ady.
Mamorona ny tanànanao, makà dragona, fahano izy ireo, ampiofano, ampiadiao hiady… Izany rehetra izany sy ny sisa dia tsy maintsy hataonao ao amin'ny Dragon City, mba ho tompona dragona nofinofisinao fatratra. Midira amin'ny tamba-jotra mpampiasa an-tapitrisany eran'izao tontolo izao ary mifandray amin'izy ireo amin'ity lalao ady, ady, fanatsarana ary hetsika maro ity.
Dragon City dia lalao multiplayer izay tsy maintsy hanombohanao hatramin'ny voalohany sy ny haavony mba hahitan'ny mpampianatra hafa anao eo an-tampony. Voalohany, tsy maintsy mamorona toeram-pambolena sy tranobe ary toeram-ponenana ianao, toy ny tanàna iray, amin'ilay nosy mitsinkafona anao. Raha vantany vao miorina tsara sy mety amin'ny zavatra rehetra ianao dia tsy maintsy manangana ny zavaboarinao hatramin'ny fahazazany ary mampiofana azy ireo hivoatra, mitovy amin'ny pokémon. Izany dia mba hahatonga azy ireo ho matanjaka kokoa sy hahery setra, mba hananana fandresena lehibe rehefa miatrika mpiady hafa ianao amin'ny lalao, izay mety ho aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao!
Manoro hevitra an'ity lalao ity izahay, toy ny dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny sokajy misy azy, izay ilay simulateur. Izy io dia iray amin'ireo rindranasa be indrindra amin'ny fivarotana Android iray manontolo ary manana tolo-kevitra avo lenta manerana ny tambajotra. Tsy misy isalasalana fa famoronana tsara dia tsara avy amin'ny Social Points, ilay orinasa miadidy ny fivoarany sy ny fanavaozana azy.
Manaraka izany, omenay anao ny antsipiriany rehetra momba ny lalao an'ity simulator mahatsikaiky ity sy ny rohy fametrahana avy amin'ny Play Store eo am-pamaranana ny lahatsoratra, mba hahafahanao mitazona azy:
1 Atsangano ny dragonao mba hahatonga azy tsy ho resy ary hahazo maro hafa
2 Fiaraha-miasa sy fanaovana fifanekena amin'ireo tompona dragona hafa mba hihamatanjaka
3 Fomba ankapobeny, maody ary fiasan'ny Dragon City:
4 Dragon City, iray amin'ireo lalao simulation be mpidina indrindra sy malaza
5 Antsipiriany misimisy sy rohy fampidinana lalao
Atsangano ny dragonao mba hahatonga azy tsy ho resy ary hahazo maro hafa
Safidio ny dragona tianao hiadiana sy hanatsara azy
Vitamina ny dragonao ary ataovy mivoatra miaraka amin'ny fanatsarana mahatalanjona amin'ny orb azo. Ataovy matanjaka sy vonona hiatrika amin'ny kianja PvP manohitra ny dragona tompony hafa izy!
ihany koa azonao atao ny manitatra ny fanangonana dragona mba hanome anao fitsaharana eo anelanelan'ny ady sy hanana repertoire malalaka, ka asehoy izany amin'ny namanao sy mpifaninana aminao. Ampandehano amin'ny fandresena sy ny fomba hafa ho hitanao amin'ny lalao izy ireo. Misy zavaboary an-jatony azonao atao rehefa mandroso amin'ny lalao ianao!
Fiaraha-miasa sy fanaovana fifanekena amin'ireo tompona dragona hafa mba hihamatanjaka
Misy dragona an-jatony maro ao Dragon City
Afaka manao fifanekena amin'ny mpampianatra ianao, izay mety ho namanao, olom-pantatrao, fianakavianao na mpiara-miasa aminao, ary na dia mpifaninana aminao aza, hiara-hiady amin'ireo mpampianatra hafa. Miresaha amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny resaka amin'ny lalao, mifanerasera, mifanakalo hevitra sy hevitra, ary manaova fanekempihavanana mora kokoa. Raha tsy misy firaisana dia tsy misy hery!
Fomba ankapobeny, maody ary fiasan'ny Dragon City:
Miadia amin'ny sehatra samihafa amin'ny lalao
- Fenoy ny bokin'ny dragona! Misy mihoatra ny 500 ny dragona azo nangonina hampitombo ny tanànanao ary hitombo ny fanjakanao!
- Isan-kerinandro, dragona vaovao no ampiana amin'ny lalao amin'ny alàlan'ny hetsika crusade sy nosy manokana.
- Manaova dia tsara amin'ny fitsapana ny dragona sy Milalaova amin'ny Masters hafa ao amin'ny PvP Arenas hahazoana dragona manokana, angataho ny Chest Warrior-nao ary miakara ny laharana!
- Dragona tarika avy amin'ny tontolo majika amin'ny hazon'aina ary ahita ny fahaizany miafina.
- Angony ny orb sy ny diamondra ary omeo hery ny dragona- Ho hitanao ny fitomboan'ny herin'izy ireo amin'ny ady!
- Mamoha endri-javatra mandroso toy ny Tontolo Fahiny sy ny dragona mpiambina.
- interacts- Manatevin-daharana vondrona na fiaraha-miasa mba hilalao sy hiady amin'ny tompo hafa, hifampiresaka amin'izy ireo, hiara-miasa amin'ny Alliance Races ary hisokatra ny vatan'ny alliance.
- Fifandraisana amin'ny Facebook hamonjy fandrosoan'ny lalao ary milalao amin'ny fitaovanao rehetra efa nifangaro. Ka hiaraka aminao amin'izay alehanao ireo zazakely dragona.
Dragon City, iray amin'ireo lalao simulation be mpidina indrindra sy malaza
Miadia amin'ny ady PvP
Misongadina ao amin'ny Google Pay Store ny lalao noho ny lazany, izay tohanan'ny fampidinana maherin'ny 100 tapitrisa sy famerenana tsara 6.5 ​​tapitrisa, namintina ny naoty 4.6-kintana. Izany rehetra izany dia noho ny lalao tsy misy farany, fa mampiala voly. Tsy hitsahatra hilalao mihitsy ianao!
Izany dia vokatry ny fivoarany tena tsara sy ny sehatra mandroso tsara., izay miandraikitra ny Social Point, orinasa iray mifantoka amin'ny famoronana atiny nomerika, izay avy any Espana. Amin'izao fotoana izao, ity lalao ity dia manana mpampiasa maherin'ny 80 tapitrisa, na ... aleo ry tompo dragona!
Antsipiriany misimisy sy rohy fampidinana lalao
Araka ny efa nolazainay, Dragon City dia misy amin'ny alàlan'ny Google Play Store izay latsaky ny 100 MB ao amin'ny kinova 8.5.1, izay ilay mifanitsy amin'ilay navoaka tamin'ny 28 septambra. Ho fanampin'izany, mifanaraka amin'ny fitaovana misy ny Android 4.0.3 na ny rafitra fiasa avo kokoa izy io, ary misy ny terminal terminal iOS ihany koa, na dia ao amin'ny magazay tsirairay avy aza, izay ilay App Store.
Amin'ny lafiny iray, Dragon City dia mety amin'ny karazana besinimaro rehetra. Mazava fa misy herisetra, saingy ambany sy ambany ny nofinofy, ka na ny kely indrindra amin'ny trano aza dia afaka mankafy azy tsy misy olana.
Ilaina ihany koa ny manonona izany, na dia izany aza lalao maimaim-poana tanteraka, mampiseho doka sasany, fa mahazatra ny lalao izany. Mampiseho tolotra samihafa izy, toy ny orb sy dragona, ohatra, amin'ny tena vidiny. Ho fanampin'izay, mikasika ny fahazoan-dàlana mila ampiharina, mangataka fidirana amin'ny bisikileta, haino aman-jery ary rakitra izy, ary koa ny fitehirizana anatiny ny finday avo lenta sy ny tamba-jotra Wi-Fi. Ankoatr'izay, zava-dehibe ny manasongadina ny haavon'ny fanavaozana ny fitaovana nilalaovana ny lalao. Matetika dia mahazo vaovao farany miaraka amin'ny fanatsarana lehibe eo amin'ny sehatry ny fitoniana sy ny atiny vaovao.
Developer: teboka sosialy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Meteza ho tompon'ny dragona, miadia amin'ny hafa ary miomàna amin'ireo fikomiana amin'ny Dragon City
Animus Harbinger, ny sabatrao hiady amin'ny andian'ilay ratsy amin'ny ady akaiky
Inona no arovan'ny fanamarinana IP67 na IP68?